मोटरसाइकल छोडेर कार चढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन नेपालमा पाइने सस्ता कार – Medianp
मोटरसाइकल छोडेर कार चढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन नेपालमा पाइने सस्ता कार
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, पुष १५, २०७५१६:२२0
काठमाडौं। हरेक मध्यम बर्गीय नेपालीले काठमाडौँमा आफ्नै घर,गाडी किन्ने सपना देख्ने गर्दछ । कतिको सपना पुरा हुन्छ भने कतिको सपना अधुरै रहने गर्दछ । पछिल्लो समय नेपालमा निजि सवारी साधनको बिक्रि ह्वातै बढेको देख्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट मार्फत सवारी साधनको अन्तशुल्क वृद्धि गरे पनि निजि सवारी साधनको बिक्रि घटेको छैन । कम इन्जिन क्षमताका सावरी साधनको मूल्य भने खासै वृद्धि भएको छैन ।
सवारी साधनको इन्जिन क्षमताको आधारमा अन्तशुल्क र कर निर्धारण गरेको छ । करको वृद्धि गरेसँगै नेपालमा रहेका विभिन्न ब्रान्डका आयातकर्ता कम्पनीले मूल्यमा हेरफेर गरेका हुन् । यहाँ हुन्डाई, मारूती सुजुकी, रेनो र ड्याट्सनका नेपाली बजारमा उपलब्ध यस्ता कारको मूल्य सहितको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
९३ देशलाई उछिन्दै नेपाली छोरी सुनमायाले जीतिन विश्व प्रतिष्ठित उपाधी